Mpanamboatra kilalao biby fiompy | China Pet Toys Factory
Kilalao Sy Tady Alika
Ny kilalao alika baolina sy tady dia vita amin'ny fibre landihazo voajanahary sy fitaovana fandokoana tsy misy poizina, tsy mamela korontana hafahafa hanadiovana izany.
Ny kilalao alika baolina sy tady dia mety tsara amin'ny alika antonony sy alika lehibe, izay tena mahafinaritra ary hampifaly ny alikanao mandritra ny ora maro.
Ny kilalao alika baolina sy tady dia tsara amin'ny fitsakoana ary manampy amin'ny fitazonana ny hihy ho madio sy mahasalama Manadio nify sy manotra siligaoma, mampihena ny fananganana takelaka ary misoroka ny aretin'ny siligaoma.
Kilalao mifandray amin'ny alika
Ity kilalao ifandraisan'ny alika ity dia vita amin'ny fitaovana ABS sy PC avo lenta, fitoeram-pisakafoanana azo antoka, mateza, tsy misy poizina ary azo antoka.
Ity kilalao ifandraisan'ny alika ity dia nanao «tumbler» ary ny famolavolana lakolosy ao anatiny dia hanaitra ny fahalianan'ny alika, afaka manatsara ny faharanitan'ny alika amin'ny lalao fifaneraserana.
Plastika avo lenta avo lenta, maimaim-poana BPA, ny alikanao dia tsy hanorotoro azy mora foana. Kilalao alika ifandraisana ity fa tsy kilalao fitsakoana mahery setra, azafady, azafady. Mety ho an'ny alika kely sy salantsalany io.
Kilalao mpamahana saka
Ity kilalao sakafom-saka ity dia kilalao miendrika taolana, mpizara sakafo, ary baolina mitsabo, ny endri-javatra efatra dia kilalao miorina anaty iray.
Ny firafitry ny fihinana mihinana miadana dia mety mifehy ny hafainganan'ny fihinananao biby, ity sakafon-tsakafon'ny saka ity dia misoroka ny tsy fihinanan-kanina ateraky ny fihinanana tafahoatra.
Ity kilalao sakafon-saka ity dia manana fitoeram-pitahirizana mangarahara, mahatonga ny biby fiompinao hahita mora foana ny sakafo ao anatiny..